07-Jul-2020 to 18:56
APA-Harare (Zimbabwe) — Zimbabwe president Emmerson Mnangagwa has sacked his Health minister, Obadiah Moyo over a Covid-19 scandal involving $80 million, a senior government official tweeted on Tuesday.
07-Jul-2020 to 16:30
APA-Harare (Zimbabwe) — Nurses at Zimbabwe's public hospitals have vowed to continue protesting until the government agrees to pay them in United States dollars and releases their colleagues arrested for demanding better working conditions.
24-Jun-2020 to 17:19
Zimbabwe more than doubles fuel prices
APA-Harare (Zimbabwe) — Zimbabwe on Wednesday raised the price of fuel by up to 150 percent, a day after it abandoned a fixed exchange rate regime that has been in place since March.
20-Jun-2020 to 14:55
APA-Harare (Zimbabwe) — Zimbabwe's Health Minister Obadiah Moyo on Saturday appeared in court on allegations he corruptly awarded a contract to supply coronavirus supplies to a shadowy company.
16-Jun-2020 to 11:43
Zimbabwe’s inflation rose to 785 percent in May
APA-Harare (Zimbabwe) — Zimbabwe’s annualised inflation rate rose by 20 percentage points to 785.55 percent in May as the economy continues to totter along on the back of an unstable currency and an acute shortage of fuel, official data showed on Tuesday.